वामदेव गौतम अब माननीय - No 1 News Portal Online News Nepal
Home समाचार वामदेव गौतम अब माननीय
वामदेव गौतम अब माननीय
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष वामेदव गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा शपथ लिएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम सरकारको सिफारिसमा गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा मनोनित गरेकी हुन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले मनोनित गरे लगत्तै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सिंहदरबारमा गौतमलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। सरकारले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भदौ १८ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकमा गराएका थिए।
फागुनदेखि रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभाको एक पदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पुनःनियुक्त गर्ने चर्चा चलेको थियो। उक्त विषयले नेकपामा विवाद चर्किएपछि नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभामा गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी सचिवालय बैठकमा गराएका थिए।
फागुनमै राष्ट्रियसभा सदस्यको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएपछि डा. खतिवडा गैर सांसदको रुपमा ६ महिनाम्म मन्त्री बनेका थिए। गौतमलाई सरकारले राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने निर्णयसँगै उनको मन्त्री पद जाने निश्चित भएपछि खतिवडाले भदौ २० गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। खतिवडालाई अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीकै सुविधामा विशेष आर्थिक सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएका छन्।
Previous articleपहिलो दिन बसमा यात्रु भएनन्, स्थानीय तहको रोक कायमै
Next articleमन्त्री ज्ञवाली : आवश्यक परे सच्याएर एमसीसी अनुमोदन हुन्छ